Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » A nabatara ọgwụ mgbochi DNA nke mbụ COVID-19 na India na India
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • India na -agbasa ozi ọma • News • Safety • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mgba ọgwụ mgbochi ahụ, ZyCoV-D, na-eji akụkụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa sitere na nje na-enye ntuziaka dị ka DNA ma ọ bụ RNA iji mepụta protein nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-amata ma na-aza.
India akwadola ọgwụ mgbochi coronavirus ọhụrụ.
Enyere nkwado maka ojiji ndị okenye na ụmụaka 12 na afọ.
India bu n’obi ịgba ndị okenye niile ruru eru ọgwụ mgbochi site na Disemba, 2021.
Oghere DNA mbụ nke ụwa megide nje COVID-19 enwetala nkwado mberede nke Central Drugs Standard Control Organisation nke Gọọmentị India (CDSCO), ka obodo ahụ ka na-agbasi mbọ ike ibute nje ahụ na steeti ụfọdụ.
The CDSCO Enyere nkwado maka ojiji mberede na ndị okenye na ụmụaka gbara afọ 12 na karịa.
Nkwado ahụ ga -enye ogbugba izizi maka ndị na -erubeghị afọ 18, wee gbaa ya ume IndiaMmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nke bu n'obi ịgba ndị okenye India niile ruru eru ọgwụ mgbochi site na Disemba, 2021.
N'adịghị ka ọtụtụ ọgwụ mgbochi coronavirus, nke chọrọ ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ ọbụna otu mkpụrụ ọgwụ, a na-enye ZyCoV-D n'ụdị atọ.
Onye na-emepụta ọgwụ, nke edepụtara dị ka Cadila Healthcare Ltd, bu n'obi imepụta nde 100 ruo nde 120 nke ZyCoV-D kwa afọ ma amalitela ịkwakọba ọgwụ mgbochi ahụ.
Ọgwụ mgbochi Zydus Cadila, nke ewepụtara na mmekorita ya na Ngalaba Nkà na ụzụ Ihe Ọmụma, bụ ogbugba nke abụọ na-eto n'ụlọ iji nweta ikike mberede na India mgbe Covaxin Bharat Biotech gasịrị.
Onye na-emepụta ọgwụ kwuru na ọnwa Julaị ọgwụ mgbochi COVID-19 ya dị irè megide mutant coronavirus ọhụrụ, ọkachasị Delta variant, na a na-eji ogbugba a na-enweghị agịga eme ihe megidere sirinji ọdịnala.
Firmlọ ọrụ ahụ etinyela akwụkwọ ikike maka ZyCoV-D na Julaị 1, dabere na ịdị irè nke pasent 66.6 na ikpe ikpe-azụ nke ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 28,000 na mba niile.